Umzana waseGolubickaya ungenye yezindawo ezidume kakhulu zokuzilibazisa kulo lonke i-Taman. I-Azov Sea ecacile, isimo sezulu esivumelana nokuphumula nokubuyiselwa, amabhishi asenhlabathi kanye nengqalasizinda ehambelanayo yezokuvakasha - yini enye ongayifisa? Futhi inezimboni ezizimele ze-Golubitsk, lapho kungenzima ukukhetha ukhetho lokuhlala oluhambisana nemisebenzi yakho kanye nezidingo zakho.
Kungani ngempela Golubitskaya - aphumule ngekhulu
Okokuqala, beza lapha ngenxa yezici ezithandekayo zemvelo nezesimo sezulu. Enye yezimpawu zendawo yokubhuka yilezidaka zodaka. Yindawo yokukhishwa kwemvelo yemvelo yokwelashwa kwezifo ezihlukahlukene. Kungenxa yalesi sizathu ukuthi abantu abaningi baya eholidini eGolubitskaya. Imikhakha yangasese ayiyona indlu kuphela yokuqasha abanikazi namahhotela amancani, kodwa futhi izindlu eziningi zokuhlanza ezithokozile nezindlu ezincane zamaholidi. Kukhona indawo yokupaka i-resort yamanzi kanye nepaki yokuzijabulisa. Wonke amabhishi ahlomele kahle: kunezihlambi kanye ne-cabanas yokugqoka, izivakashi zinikelwa ama-stanitsas nokuzijabulisa okuhlukahlukene - ukugibela ibhanana, ukuhamba kwamanzi, ukuhamba kwezilwandle. Ngaphandle kwamabhishi alula izigqoko ezilungisiwe kahle, ukuhamba kahle, amathilomu kanye nezitolo zokukhumbuza zivulekile.
Stanitsa Golubickaya: umkhakha wangasese (ukuzijabulisa e-sanatoria namahhotela)
Emzaneni nasezindaweni ezikude kunenqwaba yamahhotela angasese kanye nama-sanatoria amancane. Etholakala odakeni lwendawo yangasese lusetshenziselwa ukwelashwa kwezifo zesimiso se-musculoskeletal. Cishe zonke ihhotela zanamuhla zinikeza izivakashi zayo izinsiza ezihlukahlukene ze-spa kanye nokwelapha kahle. Ekuphakameni nasezindaweni zengqalasizinda: ensimini yehhotela elilodwa kungaba nezindawo zokudlela eziningana nemigoqo, iklabhu yayo ebusuku, izikhungo zezemidlalo. Amahhotela okufundela umnotho aphansi kakhulu. Abanye babo abanalo insimu yabo, kepha lapho bekhetha ukhetho olunjalo lokuhlala, usengathola iholide elikhunjulwayo eGolubitskaya. Umkhakha wangasese wendawo ugcwele izindawo zokuzijabulisa ezihlukahlukene. Ngaphandle kobunzima, ungathola indawo lapho ungaba khona ukudla okumnandi. Wanikezwa emagumbini okuhlala nokunethezeka - indawo lapho ungakwazi khona ukunambitha iwayini ne-cognac yokukhiqizwa kwendawo.
Stanitsa Golubickaya: umkhakha wangasese (izindlu zokugibela kanye nezindlu ezivela kubanikazi)
Uma ufuna emzaneni akukona kunzima ukuqasha igumbi noma indlu kubanikazi. Indawo ejwayelekile yokuhlala - amahotela amancane aphansi, kanye nezindlu zokubhoda, zibalwa kaningi emininingwaneni yokuphumula. Abaningi abavakashela izivakashi bathola lolu hlobo lwezindlu olukhululekile kakhulu. Ezimweni eziningi, izindlu ezisemzaneni iGolubitskaya (umkhakha wangasese) zimelelwa izindlu namahhotela aseduze naso olwandle. Ngesikhathi esifanayo, ukhetha indlu yalolu hlobo, ungagcina. Izinhlinzeko eziwusizo kakhulu kulabo abakhetha ukuvakasha komndeni noma ukuya olwandle ngeqembu labangani. Uma ufuna, ungathola okuhlukile ngokudla okuyingxenye noma okugcwele, ukuxoxisana nabanikazi bendawo ngokuhlinzekwa kwamasevisi engeziwe. Abantu bendawo banomusa futhi banobungane, bayajabula ukuhlangabezana nezivakashi futhi banikeze usizo uma kunesidingo.
Isikhumbuzo "Ubuhlobo Babantu" (Izhevsk, Republic of Udmurtia)